Uluhlu 1.. Funda iTheyibhile yokuPhindaphinda kuka-1
Amaxesha ama-1 etafile
Itheyibhile e-1 yenye yeetafile elula. Ngokuyijonga kube kanye siyakuqonda ukuba naliphi na inani eliphindaphindwe ngo-1 liyakuba lelo nani linye. Ingcaciso kukuba i-7 × 1 ngu-7, oko kukuthi, kube kanye kuphela isi-7. Itheyibhile yokuphindaphinda 1 ayifuni mizamo mikhulu ukuyifunda, awunyanzelekanga ukuba ukhumbule nantoni na. Kulula kakhulu.
Ukuyiqonda ngcono, masicinge ukuba sineelamuni ezisi-7, ngoko ke ukuba siziphinda-phinda ngo-1, oko kuthetha ukuba ikwangumlinganiso omnye, oko kukuthi, ngu-7. Itafile ye-1 yitafile esingasokuze siyisebenzise kubomi bethu bemihla ngemihla, kunqabile kakhulu, kodwa kubalulekile ukuyazi kuba iya kusenza siqonde enye ukuphindaphinda iitafile.
Abanye abantu bayabhideka itafile ka-0 kunye no-1Nangona kunjalo, izisombululo zetheyibhile engu-0 ziyakuhlala zingu-0, kungenxa yokuba naliphi na inani eliphindaphindwe kayi-0 lingu-0. iziphumo ziya kuba ngama-1.
Iimpawu zetheyibhile e-1 :
• Enye yeetafile ezilula
• Naliphi na inani eliphindaphindwe ngo-1 liyakuhlala liyiloo nani linye.
• Isenza siqonde ukuba naliphi na inani eliphindaphindwe kube kanye liya kuba lelo nani linye, ngaphandle kwamathandabuzo, yeyona tafile ilula.
• Si Sinebhaskiti enee-apile ezi-3, kwaye asisenazo iibhasikithi, sinebhaskiti enye kuphela, oko kukuthi, ii-apile ezi-1 kwibhasikithi enye (3 × 1 = 3) ii-apile ezi-1.
• Ukuba sinebhanana ebhegini enye, kodwa sinebhegi enye kuphela, sinebhanana enye (1 × 1 = 1).
• Ukuba sinee-wardrobhu ezi-5 kwaye kwikhabhathi nganye sinesuti enye, sineesuti ezi-1 (5 × 5 = 1).